Archive du 20161109
Ministeran�ny fahasalamana Milalao 300 miliara Ar, mandoa vola ny marary
Mbola tena tsizaizary ny fiahiana ara-pahasalamana eto Madagasikara, zaza latsaky ny 5 taona 120 isan�andro na 44 000 isan-taona no mamoy ny ainy noho ny aretina tsy voatsabo araka ny tarehimarika navoaky ny Unicef tamin�ny 2014 ary renim-pianakaviana 3000 no maty isan-taona noho ny fahasarotana eo am-piterahana
Depiote Charles Andriamahefa �Malahelo ny vahoaka raha mandeha taksibrosy izahay�
Tany amin�ny andron�ny praiminisitra Francisque Ravony no nisian�ny resaka fanambazana fiara sy vola voalohany tamin�ny fametrahan�ny solombavambahoaka azy ho praiminisitra ny taona 1993.
Merseneran�ny Fitondrana Raikitra ny adin�ny samy mpanohana
Tsy misy foto-kevitra hijoroana fa voavidim-bola aman-karena ireo mpanohana ny filoham-pirenena ankehitriny, raha ny fahitana azy.
Mpitari-bato vilam-bava !
Manahoana ry Jean a ! Tena mba nahafinaritra kosa aloha ilay tenin�i Solo be hoe tapahana avy hatrany ny angovon�ireo sapandraharaham-panjakana be vinany tsy mahaloa ny saran�izany e ! Tehaka mirefodrefotra aloha ry Jean a !
Filankevitra monisipaly Antananarivo Miatrika fivoriana ara-potoana
Notanterahina nanomboka omaly talata 8 novambra haharitra telo andro ny fivoriana ara-potoanan'ny filankevitra monisipaly eo anivon�ny tan�nan� Antananarivo Renivohitra.
Hetsiky ny mpanao gazety Hihetsika amin�ny fivorian�ny Frank�f�nia
Nanao fanambarana goavana tetsy Antanimena indray omaly ny avy eo anivon�ny hetsiky ny mpanao gazety mivondrona ho an�ny fahalalahana na ny MLE.
Sendikan�ny mpitsara Miantso ny vahoaka hahatoky ny fitsarana
Nifoha tamin�ny torimasony ny sendikan�ny Mpitsara eto Madagasikara (SMM) taorian�ny fitsaram-bahoaka nisesisesy nanerana ny nosy.
TAPATAPANY ANTANANARIVO RENIVOHITRA
Manomboka omaly talata 8 novambra ary haharitra telo andro ny fivoriana ara-potoanan'ny Filankevitra Monisipaly
Fiantohana ny ho avin�ny zanaka Hanampy ireo ray aman-dreny ny BNI
Betsaka ireo ray aman-dreny no tsy manana antoka mazava hahafahany manohana an-janany intsony ankehitriny, indrindra fa ny fahafahana mampiana-janaka hatramin�ny farany, izay tena handaniana volabe tokoa aorian�ny fahazoana ny mari-pahaizana Bakal�rea.
Fikambanana Gasy Jiaby �Mbola voavakavaka ny vehivavy. �
Miady mafy hatrany ny avy eo anivon�ilay fikambanana Gasy Jiaby izay manana tanjona ny hamongotra tanteraka ny olana ara-taratasy eto amintsika afaka 10 taona.
Andranonahoatra Itaosy Nirehitra ny abatoara sy ny toeram-pivarotan-kazo
Fotoana tena mampahazo vahana ny hain-trano izao vanim-potoanan�ny hafanana izao. Voakasik�izany ny teny Andranonahoatra Itaosy izay nitrangana hain-trano goavana ny alatsinainy nifoha omaly talata tokony ho tamin�ny 12 ora alina.
Antananarivo Renivohitra Ny 40 %-n�ny mponina ihany no mandoa hetra ara-dal�na
Tena malaina mandoa hetra ny mponin�Antananarivo Renivohitra amin�ny ankapobeny.
Fivarotana sy fifohana rongony Tambajotra iray indray no sarona
Anisan�ny tena mampitaraina fatratra ny maro ny fisian�ny olona mivarotra sy mifoka rongony eny amin�iny faritra Ambohimangakely, Ambohimanarina, Ankadindramamy, Marais Masay,
Marc Ravalomanana Mahita vahaolana hatrany
Olon�ny teny omeny ary tsy mba mivadika amin�ny zavatra nambarany fa ataony i Marc Ravalomanana.
Mihetsika ny FJKM Hamoaka mpitandrina 100 isan-taona
Hankalaza ny faha-50 taona nijoroany amin�ny taona 2018 ny Fiangonan�i Jesoa Kristy eto Madagasikara (FJKM).
Mila tonga saina
Tsy fantatra intsony na mbola eto amin�ny planeta tany na any amina tontolo hafa mihitsy no misy an�i Madagasikara.Tsy misy zavatra mbamahafinaritra sy mahasondriana fa dia sorisory no iainana isan�andro.